FBC - Paarlaamaan Awrooppaa Ityoophiyaarratti murtoon dabarse heera biyyattii xiqqeessuuf kan yaale-Ministeera Dhimma Alaa
Paarlaamaan Awrooppaa Ityoophiyaarratti murtoon dabarse heera biyyattii xiqqeessuuf kan yaale-Ministeera Dhimma Alaa
Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC)- Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Awrooppaa dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa kan jiru waa’ee Dooktar Mararaarratti ibsi baase heera biyyattii xiqqeessuuf yaalurra kan darbe bu’aa hin qabu jedhe Ministeerri Dhimma Alaa Ityoophiyaa.
Ministeerichi ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif ergeen, biyyattiin Gamtaa Awrooppaa waliin dhimmoota hedduurratti hojjechaa akka jirtuu fi kanaanis deeggarsa jajjabeessaa argachaa akka jirtu yaadachiisera.
Qaama seera baasaa gamtichaa kan ta’e Paarlaamaan Awrooppaa ibsi amma baases haala biyyattiin irra jirtu warren hubachuu dadhaban irraa ka’ee kan ba’e jedheera.
Nagaa fi tasgabbiin akka bu’uu fi ummannis misoomarraa fayyadamaa akka ta’uuf mootummaan biyyattii wayita hojjechaa jirutti ibsi laatame, biyyattiin Gamtaa Awrooppaa waliin hariiroo qabduuf gaarii miti jedheera.
Qaamolee to’annoo seeraa jala jiran ilaalchisee yaadni laatames, seeraa fi adeemsa haqaa biyyattii ilaalcha keessa kan hin galchine jedheera ministeerichi.
Ibsi Paarlaamaan Awrooppaa laate guddina biyyattiirratti dhiibbaa kana jedhamu qabaachuu baatus, Ityoophiyaan hariiroo gaarii Gamtaa Awrooppaa waliin qabdu cimsaa, walitti dhufeenya isaaniis wal qixxummaa fi faayidaa waliiniirratti bu’uuressuun hojiin hojjetamu itti fufas jedheera.
Ministeerichi Gamtaa Awrooppaa waliin qindoominni jirus cimeet itti fufa jedheera.
Oduuwwan Biroo « Waggaa 5 keessatti dhibamtoota moora ijaa kuma 600 agartuu sirreessuuf hojjatamaa jira	Sakatta’i daangaa irraa wiirtuu tokkoo Itiyoo – Keeniyaa ji’a lama booda hojiirra oola »